« Sitrana ny boka !» - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Tsotra Faha-6B
Lev. 13, 1-2. 45-46; 1Kor. 10, 13 – 11, 1; Mk. 1, 40-45
Ny fanasitranan’i Jesoa boka anankiray nitalaho fanasitranana taminy no tantarain’ny evanjely androany (alahady tsotra faha-6B). Ankoatra ny fitantarana io fanasitranana io anefa dia asongadin’ny evanjely ihany koa ny toe-po amam-panahin’i Jesoa manoloana ny Lalàn’i Moizy momba ny aretin-koditra sy ny habokana.
Miankina amin’i Jesoa ny fanasitranana : « Raha mety Ianao dia mahay manadio ahy ». Izany no talahon’ilay marary hoditra, boka, nandohalika teo anatrehan’i Jesoa. Raha araka ny Lalàn’i Moizy dia tsy tokony ho nanatona an’i Jesoa akory ity boka ity. Nosokajiana ho isan’ny « mampahaloto » ny olona ny habokana teo amin’ny Testamenta Taloha ; izany hoe fady ka mahatonga ny olona iray voan’izany aretina izany tsy ho isam-bahoaka intsony, tsy ho afa-mandray anjara amin’ny sorona sy ny fanatitra ao an-tempoly intsony, ary tsy maintsy roahina ivelan’ny tanàna ; « hitokana irery any ivelan’ny toby » (hoy ny Vakiteny voalohany). Mandika ny lalàn’i Moizy ity boka ity satria mbola sahy nanatona an’i Jesoa sy nandohalika teo anatrehany ihany izy. Azon’i Jesoa ho natao tsara ny nandroaka ilay marary tsy hanatona Azy, araka izany Lalàna izany ihany. Azony ho natao tsara ihany koa ny nandositra tsy hohakaikezin’ity marary ity. Mbola ara-dalàna ihany koa izany. Miankina tanteraka Aminy àry ny hahasitrana ity marary ity. Miankina tanteraka amin’ny fahafahany ihany koa anefa na hanaraka ny Lalàna Izy na handika izany.
Nihoaran’i Jesoa ny Lalàna : « Mety aho, madiova ianao ». Mifanohitra amin’ny voalazan’ny Lalàna izany valintenin’i Jesoa izany. Fa vao mainka koa mifanohitra amin’ny Lalàna ny fihetsiny. : « Nangoraka azy i Jesoa ka naninjitra ny tanany dia nanendry [nikasika] azy ». Fantatr’i Jesoa tsara fa raha araka ny Lalàna dia « maloto », izany hoe « fady » ny habokana… Fantany tsara ihany koa fa mahatonga Azy ho « maloto » sy « manota fady » ny manakaiky sy mikasika boka. Nampangoraka azy anefa ny talahon’ity marary ity, izay nanankina tanteraka ny fiainany ho araka izay sitrapony. Ny fahefana nananany sy ny fangorahana tao anatiny no nanosika an’i Jesoa hihoatra ny Lalàna. Miharihary ny maha olombelona mahay mangoraka Azy. Mibaribary koa anefa ny maha Andriamanitra Azy, tompon’ny fahefana rehetra. Mijery ny maha olona Izy fa tsy nijery izay voalazan’ny Lalàna...
Narahin’i Jesoa indray ny Lalàna : « Mandehana misehoa amin’ny mpisorona…, manatera ny fanatitra nodidian’i Moizy ». Tsy izay mety ho Lalàna rehetra anefa dia nihoaran’i Jesoa avokoa. Misy ireo Lalàna mandrava, mampizarazara ny fiarahamonina. Misy kosa ireo Lalàna manorina, mampivondrona sy mampiray ny olombelona. Nanadio izay noheverina ho « maloto » i Jesoa, na dia tsy araka ny Lalàna aza izany. Namerina indray izay « voadio » ho eo anivon’ny fiarahamonina izy. Naniraka ilay marary hoditra vao sitrana hiseho amin’ny tompon’andraikitra ary hanatitra fanatitra hanehoana fanakasitrahana an’Andriamanitra Ray.
Naka tahaka an’i Jesoa i Md Paoly : « Makà tahaka ahy, toy ny akako tahaka an’i Kristy ». Anisan’ny fihetsika naha resy lahatra an’i Md Paoly ity fahafahana nasehon’i Jesoa manoloana ny Lalàna ity (vakiteny faharoa). Tsy manao izay hanafintohina ny olona na iza izy na iza fa manao izay hahafaly ny olona rehetra. Tsy mitady ny ho an’ny tena, fa ny ho an’ny be sy ny maro. Izany no fomba fiaina noraisin’i Md Paoly tamin’i Jesoa ka mba ampitainy amin’ny kristianina ihany koa.
Betsaka ny endrika habokana miseho eo amin’ny fiainan’ny olombelona: ao ny bokan’ny aretina ka tsy maintsy mitokana sy manaraka fihibohana tsy hifanerasera amin’ny havana aman-tsakaizany; ao ny bokan’ny trosa ka misitrika sy mandositra ny mpitaky trosa; fa ao indrindra indrindra ireo bokan’ny fahotana sy ny faharatsian-toetra ka tsy miseho andro intsony noho ny henatra sy ny famoizam-po! Soa anefa fa eo i Jesoa ilay manasitrana ny boka!
« Jesoa Tompo ô, nanasitrana ny boka Ianao tety an-tany, na dia tsy araka ny lalàna tamin’izany aza; koa ampio izahay tsy hanaraka ambokony fotsiny ny fomba amam-panao sy ny lalàna mahazatra fa hitana ny tena votoatin’ny Evanjely. Manafaha anay amin’ny ratsy rehetra ary diovy amin’ny habokan’ny fahotana izahay».
Teny Mahavelona : « Fitiavana sy Fahamarinana no tena endrik’i Kristy » - il y a 1 moi
Teny Mahavelona : « Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »﻿ - il y a 2 mois